Buy အူရှင်းဆေး in ရန်ကုန် (6,500 Ks) on ipivi
အဆီကျဆေးမတိုးသူများ၊ မြန်မြန်ဝိတ်ကျချင်သူများအတွက် အူရှင်းအဆီကျဆေးလေး လာပါပြီ ရှင်� ဗိုက်ကအဆီလား? ပေါင်ကအဆီလား? ခါးကအဆီလား? ကျချင်တဲ့နေရာကိုသာ ရွေးလိုက်ပါတော့ နော်�
(တစ်ထုပ်တွင်7လုံးပါပါတယ်ရှင်)
တော့ပဲ မပိန်လာဘူးဖြစ်နေတဲ့သူတွေ။ တသက်လုံးအဆီတက်တာတွေကို စားလာခဲ့လို့ ဝမ်းဗိုက်အဆီစုပီး ဗိုက်ခေါက် ထူနေသူများ ၊ ဝမ်းချုပ်လွန်းပီး ဗိုက်ပူပီးမအီမလည်ဖြစ် နေသူများ အတွက် အူသန့်ဗိုက်သားချပ်ဆေးလေးလာပါပြီ။
ဗိုက်သား ချပ်လာစေယုံသာမက ပေါင်ချိန်ပါ ကျစေပါတယ်။
အူရှင်းဆေး သီးသန့်သောက်ပါက တစ်လအတွင်း ၅ ပေါင်မှ ၁၀ ပေါင်ကျစေပြီး၊ တခြား အဆီကျဆေးနှင့်တွဲသောက်ပါက ပိုမိုထိရောက်သော အာနိသင်ကို ခံစားရပါတယ်။
သဘာဝပစ္စည်းတွေ နဲ့တိုင်းရင်းဆေးသစ်ဥ သစ်မြစ်တွေနဲ့ဖော်စပ်ထုတ်လုပ် ထားလို့ Side Effect ဖြစ်မှာလုံးဝစိုးရိမ်စရာမရှိပါဘူ။
ဆရာဝန်ခွင့်ပြုချက်အမှတ် GMP လက်